M/weyne Shariif oo shir jaraa?id ku qabtay Villa Somaliya, kana hadlay kulanka uu la yeelan doono Hillary Clinton. [Akhris …] – Radio Daljir
Muqdisho, Aug 04 – M/weynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Shariif Shiikh Axmed ayaa maanta shir jaraa?id oo uu ku qabtay Villa Somaliya waxaa uu kaga warbixiyey kulanka dhex mari doona isaga iyo Xoghayaha Arrimaha Dibada ee dalka Mareykanka Hillary Clinton.
M/weyne Shariif Shiikh Axmed waxaa uu sheegay shirka ay wada yeelan doonaan isaga iyo Hillary Clinton in ay kaga wada hadli doonaan arrimo badan oo ku aaddan xaaladda dalka Soomaaliya, gaar ahaan ammaanka, siyaasadda, iyo xiriirka labada wadan ee Soomaaliya iyo Mareykanka.
M/weyne Shariif ayaa sheegay kulankaasi in uu yahay fursad qaali ah oo u soo hoyatay dalka iyo dadka Soomaaliyeedba, wuxuuna ku micneeyey M/weynuhu in ay qayb ka tahay dadaallada dawladdiisu ay u gashay sidii loo darsi lahaa arrimaha murugsan ee dalka Soomaaliya.
Md. Shariif wuxuu intaasi raaciyey in 19 sano kadib adduunku in uu hadda soo jalleecay dalka Soomaaliya, isla markaana haatan ay ka go?antahay sidii Soomaaliya loo siin lahaa hiil iyo hooba, waxaana uu carabka ku adkeeyey in loo baahan yahay si aan kala har lahayn fursaddaasi in looga faa?idaysto.
Dhanka kale, M/weyne Shariif ayaa soo hadal qaaday arrimo ka baxsan kulanka ay wada yeelan doonaan dawladdiisa iyo midda Mareykanku, waxaana ka mid ahaa xarigga la tilmaamay in loo geystay dhallinyaro Soomaali ah oo ku noolayd dalka Australia kuwaasi oo lagu eedaynayo in ay maleegayeen falal argagixiso.
Wuxuuna arrintaasi ku tilmaamay in ay tahay mid ayaan darro ah isla markaana ah wax laga xumaado ah, maadaama buu yiri dhallintaasi dalkooda uga carareen dhibaatooyinka colaadeed, haddana lagu tuhmayo in ay wadaan falal ammaan xumo.
Waxaa sidoo kale wax laga weydiiyey wax uu kala socda halka ay ku danbeeyeen labo sarkaal oo u dhalatay dalka Faransiiska oo la shaqeynayey dawladdiisa kuwaasi oo dhawaan laga afduubtay huteel ay ka deganaayeen magaalada Muqdisho, wuxuuna arrintaasi ku soo koobay in ay la socdaal xaaladda nimankaasi, laakiin tallaabada laga qaadanayaa ay tahay mid qarsoodi ah oo uusan halkaasi ka sheegayn.
Shirka jaraa?id ee M/weyne Shariif ayaa ku soo beegmay xilli maalinta Khamiista ah ee asbuucaan la filayo in ay kulan toos ah wada yeeshaan M/weynaha Soomaaliya Shariif Shiikh Axmed iyo Xoghaya Arrimaha Dibada ee dalka Mareykanka Hillary Clinton.